काठमाडौँ । आजकल प्रायः हरेक अभिभावक बालबालिकाको मोबाइलको लतबाट चिन्तित छन् । मोबाइल फोनले बालबालिकाको आँखा मात्र बिगारिरहेको छैन, उनीहरु मोटोपनको सिकार हुनुका साथै जिद्दी, रिसाउने र उनीहरुको सिर्जनशीलता पनि घट्दै गएको छ । यो लतबाट छुटकारा पाउन महत्त्वपूर्ण छ । के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि बच्चाहरू कसरी यसको लतमा पर्छन् ? २-३ वर्षको बच्चाले सामाजिक सञ्जालमा कार्टुन वा गेम राख्न कसरी सिक्छ ? आमाबाबु वा परिवारका सदस्यले नै उनीहरुलाई मोबाइल चलाउन सिकाउँछन् भन्ने थाहा पाउँदा अचम्म लाग्दैन ?
बच्चाले हेरेर सिक्छ
बच्चालाई मोबाइल राख्न निषेध गर्छौं, तर हामी आफैँ दिनभर मोबाइल चलाइरहन्छौं । हामीलाई मोबाइलमा देखेर बच्चाले मोबाइल नै मनोरञ्जनको उत्तम माध्यम हो भन्ने सोच्छन् ।
हेर, बच्चाले तपाईलाई पछ्याउँछ, तपाईको शब्द होइन । बच्चाले सिकाएर भन्दा तपाईलाई हेरेर धेरै सिक्छ । त्यसैले बच्चा आफ्नो साथमा हुँदा सकेसम्म मोबाइलको प्रयोग कम गर्नुहोस् । बच्चा सुत्दा, स्कुल जाँदा वा खेल्दा मोबाइल प्रयोग गर्नुहोस् । बाँकी समय कल मात्र लिने गर्नुहोस् ।
बालबालिकाको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्
जब बच्चा सानो हुन्छ र खाना खान इन्कार गर्छ, तब धेरै आमाहरूले बच्चालाई छिट्टै खाना खान लगाउँछन्, त्यसैले आफैं बच्चालाई मोबाइल देखाएर खुवाउँछन् । यसरी बच्चालाई खुवाउने काम छिट्टै हुन्छ भन्ने उनीहरुलाई लाग्छ । तर आफ्नो अलिकति समय बचाउनको लागि उनीहरूले आफ्नो बच्चालाई र आफूलाई कति हानि गरिरहेका छन् भनेर बिर्सन्छन् । मोबाइलको उज्यालोले साना बालबालिकाको आँखा बिग्रन्छ । त्यसैगरी बिस्तारै बच्चालाई मोबाइलको बानी पर्दै जान्छ ।
मोबाइलको प्रलोभन नदिनुहोस्
बच्चाले घरको काम चाँडै पूरा गरोस् वा खाना चाँडै खाओस् भनेर कतिपय अभिभावकहरूले उनीहरूलाई मोबाइलको प्रलोभन दिन्छन्। तर यसरी बालबालिकालाई मोबाइलको बानी परेको छ । मोबाइलको प्रलोभन नदिनुहोस्, तर उनीहरूलाई यो बुझाउनुहोस् कि गृहकार्य गर्नु, खाना खानु उनीहरूको लागि राम्रो हो । बच्चाको अगाडि बसेर खाना खानुहोस् र त्यस समयमा फोन प्रयोग नगर्नुहोस् । उनको अगाडि किताब पढ्नुहोस्, यसले बच्चालाई यो पनि थाहा हुनेछ कि यो सबै आफैले गर्न आवश्यक छ र यो सबै गर्दा फोनको कुरा हुने छैन ।
आफ्नो 'नो' मा अडिग रहनुस्
बच्चाले अलिकति पनि जिद्द गर्दा, एकछिन रुदा पनि आमाबाबुले हतारमा उसलाई मोबाइल दिने गरेको पाइन्छ । बच्चाले जिद्दी गर्दा मोबाइल नदिनुस्, किनकी बच्चालाई अलिकति जिद्द वा रोएर आफ्नो माग पूरा भयो भने त्यो उसको अनुमान बन्नेछ । त्यसैले अस्वीकार गरेपछि, आफ्नो कुरामा अडिग रहनुहोस् ।
मोबाइल खोसेर नलिनुस्
बच्चालाई मोबाइल चलाउँदा ढिलो भयो भने तुरुन्तै बच्चाबाट मोबाइल खोस्नु हुँदैन । यसो गर्दा बच्चाको मन रिसले भरिन्छ । कल्पना गर्नुहोस् कि तपाई मोबाइलमा गेम खेल्दै हुनुहुन्छ र अचानक कसैले मोबाइल खोस्यो, तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? बच्चालाई उसले हेरिरहेको कार्टुन हेरेर सकेपछि मोबाइल दिन भन्नुहोस् । यसो गर्नाले बच्चाले स्वचालित रूपमा तपाईलाई फोन दिनेछ ।
राम्रो समय बिताउनुस्
बच्चाहरूलाई आमाबाबुको माया र हेरचाह चाहिन्छ । तर, अहिले अभिभावकसँग समयको कमी छ । मोबाइल समातेर समयको अभाव पूरा गर्न चाहन्छन् । तर याद गर्नुहोस् कि मोबाइल वा अन्य कुनै उपकरणले तपाइँको स्थान लिन सक्दैन । यदि तपाईंले बच्चासँग राम्रो समय बिताउनुभयो भने, तपाईंको बच्चाले विस्तारै मोबाइलको प्रयोग कम गर्नेछ ।
रुचि अनुसार बालबालिकालाई चित्रकला, नृत्य, संगीत आदि कक्षामा भर्ना गर्न सकिन्छ । यहाँ उसले केहि नयाँ सिक्ने मात्र होइन, नयाँ साथी पनि बन्नेछ । यसले उनको व्यवहारिक ज्ञान पनि बढ्छ । मानिससँग कसरी उठ्ने र बस्ने, कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा उसले राम्ररी सिक्नेछ ।
आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्नुहोस्
फुर्सदको समयमा बालबालिकाको क्षमता अनुसार घरेलु काममा सहयोग लिने गर्नुस् । यसबाट बालबालिका मोबाइलबाट टाढा हुने, आत्मनिर्भर बन्ने र केही व्यवहारिक कुराहरू पनि सिक्नेछन् ।
मायाको अर्थ मोबाइल होइन
धेरै आमाबाबुले बच्चालाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ कि उनीहरूले उसलाई होइन भन्न नसकेको देखिन्छ, बच्चा रोएको देख्न सक्दैनन् । त्यसैले बालबालिकाले मोबाइल मागेपछि दिन्छन् ! यदि तपाई आफ्नो बच्चालाई साँच्चै माया गर्नुहुन्छ भने मोबाइलले बच्चालाई हुने हानिलाई ध्यानमा राखेर कम समयको लागि मात्र मोबाइल दिने गर्नुस् ।
अहिले अनलाइन शिक्षाका कारण सानै उमेरमा बालबालिकालाई मोबाइल दिनु बाध्यता बनेको छ । तर कक्षा बाहेक, यहाँ दिइएका सुझावहरूले पक्कै पनि तपाईंको लागि काम गर्नेछ ताकि बच्चाले लामो समयसम्म मोबाइल प्रयोग नगरुन् ।